कला सजना बराल
स्नातकोत्तर तहको थेसिसका रूपमा दीपक तोलाङ्गेले निर्माण गरेको इथ्नोग्राफिक सिनेमा छारोले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको छ।
नेपालीले सौम्यता मार्फत बनाएको छवि प्रशंसनीय छ, तर अझै अधुरो र अपुग छ।
के थियो पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण रणनीति? पृथ्वीनारायण शाहद्वारा सञ्चालित सैनिक अभियानको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष राष्ट्रिय शक्तिका चार साधनहरू कूटनीति, सूचना, सैनिक र आर्थिक पाटोको समन्वयकारी तथा प्रभावकारी परिचालन थियो।
फातसुङ उपन्यासको अङ्ग्रेजी अनुवाद सार्वजनिक पहिचानका लागि गरिएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे भारतीय मूलका नेपाली लेखक छुदेन काविमोले लेखेको उपन्यास फातसुङको अङ्ग्रेजी अनुवाद सङ अफ द सोयल सार्वजनिक गरिएको छ।
को हुन् असुर? आफूलाई असुर भन्ने जाति हालसम्म नेपालमा स्पष्ट नभए पनि प्रकारान्तरले असुर सम्बद्ध सीमान्तकृत अनार्य जाति पाइने सम्भावना छ।
नायक भूमिकामा उनी... स्वास्नीमान्छेलाई वेश्या बनाएर भोग्न एक सेकेन्ड नहिचकिचाउने, तर विदूषी भएर ससम्मान फूलमालाले सजिएको पनि सहन नसक्ने शासक सोचले ग्रस्त छ, समाजको मूल धार।
दशैं दाफा जसरी दशैंका वेला विदेश गएका पनि घर फर्कन्छन्, दाफा खलःमा पनि यस्तै जम्काभेट हुन्छ। यो पारिवारिकभन्दा पनि सामुदायिक मिलन हो।
लाहुरको त्यो दशैं मुलुकको भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिर विस्तारित पहिलो नेपाली समाज, लाहुरमा मनाइने दशैंले परदेशमा ‘मिनी नेपाल’ कै झल्को दिन्थ्यो।
आज विजयादशमी, टीकाको साइत बिहान १० बजे आज बडादशैं अर्थात् विजयादशमीको मुख्य दिन मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै छ।
महाकाल संवाद नकाम, पर्दैन काम्नु तिमीले। उसको डिजाइनमा तिम्रो कम्पनको कुनै अर्थ छैन। तिमीलाई थाहै छ भिसुभियस झैं यो अचानक छैन, क्याट्रिना जस्तै अचानक छैन, कोशीको बाढी जस्तो अथवा अस्ट्रेलियाई अग्निज्वाला जस्तो अचानक छैन यो; उसले ‘म आउँछु’ भनेकै थियो।
बाह्रखरीको मेरो पाठशाला धरानको सबैभन्दा पुरानो पब्लिक हाई स्कूलमा केटा मात्रै पढ्थे भने शारदा बालिका विद्यालयमा केटी। तर, हाम्रो स्कूलमा भने शुरूदेखि नै केटाकेटी दुवै पढ्थे। धरानमा यस्तो सह-शिक्षाको थालनी गर्नेमा अग्रणी थियो, हाम्रो श्री भगवती मिडिल स्कूल।
तिमी छेउ नगइरहन पनि सक्दिनँ, बसिरहन पनि सक्दिनँ। तिमीबाट टाढा हुँदा पनि पोल्छ मन। छेउ हुँदा त झन् ग्लानिले भतभती पोल्छ।
टिस्टाका बदलिएका कथा
जुन ठाउँको मान्छेले बिमार हुँदासम्म टिस्टाको भाकल गर्थे। परेवा उडाउँथे। पूजाअर्चना गर्थे। माछा ल्याएर छोड्थे। त्यही ठाउँका मानिसहरूले टिस्टाको रोग कहिले अनुभव गर्ने होला?
अमेरिकानो डबल शट
जनताले आफूलाई मन नपरेको नेतालाई हरेक दिन एक-दुई मुक्का हान्न पाउने कानूनी व्यवस्था भैदिएको भए हिजोआज सबै नेताहरूको खप्परमा टुटुल्को हुने थियो।
रानीको प्रेम ‘म पनि मेरी रानीसँगै मर्छु,’ निर्णय गरें। आदेश दिएँ- ‘चिहानमा रानीको शव मेरो काखमा राखेर सबै मलामी फर्किनू। प्रेम र मृत्युलाई अनुभूति गर्दै बिस्तारै मर्नेछु।’
नेपालबाट चोरिएका ती सय सम्पदा न्यूयोर्कको मेट्रोपोलिटन म्यूजियमले शिवको मूर्ति फिर्ता गर्न लागेको खबर आएसँगै त्यहाँ रहेका एक सयभन्दा बढी नेपालका मूर्ति फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने इतिहासकार प्रा. रमेशकुमार ढुंगेल बताउँछन्।
वरदायिनी स्कुल सानुले भन्यो- जाबो सय रूपैयाँ पनि कसैले ब्याङ्कमा राख्छ? गतिलो ब्याङ्कमा त खाता खोल्नै पाँच सय लाग्छ। पत्रुलाई यत्ति पनि थाहा छैन।
नेपाल र महाचीन भारतीय लोकयात्रा अर्थात् सभ्यता फैलेका देशलाई एक थरी ऐतिहासिकहरुले ‘बृहत्तर भारत’ भने जस्तै चीनको राजकीय लेखमा आएको ‘महाचीन’ शब्दको अर्थ पनि खास चीन देश भन्ने नभई चीनको प्रभाव क्षेत्र हो।
पद्मश्री पुरस्कार ‘मोक्षभूमि’ र पद्मश्री सम्मान आचार्यलाई प्रदान गरिने खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले केशव दाहालको उपन्यास ‘मोक्षभूमि’ लाई पद्मश्री पुरस्कार र गायक तथा सङ्गीतकार भक्तराज आचार्यलाई पद्मश्री सम्मान २०७७ प्रदान गर्ने भएको छ।
‘कुमार बस्नेतलाई केटी बनाएर नचाएँ, नेहरूले थपडी बजाए’ मैले मिहिनेत गरें, तर आर्थिक अभावले गर्दा आमालाई दशैंमा के लुगा लगाउने आमा भनेर कहिल्यै भन्न पाइनँ।
अँध्यारोमा लुकेर बसेको थिएँ, मदन पुरस्कारले उज्यालोमा ल्याइदियो : नृत्यशास्त्री थापा जगदम्बा-श्री सम्मानबाट सम्मानित हुन लागेका नृत्यशास्त्री भैरवबहादुर थापाले आफूलाई मदन पुरस्कार गुठीले अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याएको बताएका छन्।
मदन पुरस्कार विजेता इङ्नाम भन्छन्- कथा सुने जस्तो भयो, विश्वासै लागेन मदन पुरस्कार विजेता लेखक भगिराज इङ्नामले आफ्नो पुस्तकले पुरस्कार पाएको सुन्दा विश्वासै नलागेको बताएका छन्।
थापालाई जगदम्बा-श्री सम्मान र इङ्नामलाई मदन पुरस्कार जगदम्बा-श्री सम्मान नृत्यशास्त्री भैरवबहादुर थापालाई र मदन पुरस्कार लेखक भगिराज इङ्नामलाई प्रदान गरिने भएको छ।
बौद्धिक परनिर्भरता विरुद्धको पहिलो पाइला (पुनःप्रकाशित) नयराज पन्तकै शैलीमा अरू क्षेत्रमा पनि काम गरिएको भए नेपाल विद्याका केही हाँगाबिंगाको केन्द्र बन्थ्यो, अहिले जस्तो सबै क्षेत्रमा परमुखापेक्षी हुँदैनथ्यो।
सुजित मैनालीको पुस्तक ‘सती’ सार्वजनिक मानव इतिहासकै क्रूरतम अध्याय मानिने सती प्रथाबारे सुजित मैनालीले लेखेको पुस्तक ‘सती : इतिहास र मीमांसा’ सार्वजनिक भएको छ।